Indlu yaseJoya Village - I-Airbnb
Indlu yaseJoya Village
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDennis
IJoya House yilali ehlaziyiweyo ka-2015 enamagumbi amabini okulala ayindlu enemigangatho emibini (120m2), eneyadi yayo ebiyelweyo yabucala eAgios Leon, eZante. Ilungele ukuya kuthi ga kubantu aba-5, iintsapho, izibini, izihlobo, inika amava okwenene 'njengabemi', njengoko unokuhamba kwizitrato ezimxinwa zelali, kwaye udibanise nabantu bayo.
IJoya Village House inekhitshi elikumgangatho ophantsi, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlala, elineyadi yabucala ebiyelweyo, kunye namagumbi amabini okulala kumgangatho ongaphezulu.
Kwigumbi lokuhlala kukho i-sofa, i-FULL HD T.V., i-USB-Charger kunye nendawo yokucima amandla, kwakhona kukho ikhitshi enkulu yendlu. Apho ungafumana zonke izixhobo zombane kunye nezixhobo, ezinje, umpheki oneehotplates, i-oveni, itoaster, imicrowave, iketile njl.njl.
Kwigumbi lokulala eliphambili unokufumana ibhedi ephindwe kabini (ubukhulu bokumkanikazi) kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite. Umatrasi webhedi uyintuthuzelo ngokwenene kunye nemithombo engama-300 yokulala okuphumla ngokwenene, esona sizathu siphambili sokukhetha indlu. Kwakhona kukho i-TV egcweleyo ye-HD, isidlali-DVD, i-A/C, kunye nerediyo yeVintage.
Kwigumbi lokuhlambela unokufumana zonke izinto eziluncedo, ezinje ngeeshampu, ijeli yeshawa, iisepha, iitawuli kunye nesomiso seenwele nazo zikwakhona.
Kumgangatho woku-1 kukho igumbi lokulala lesibini elinebhedi encinci eNcinci kunye neBhedi enye. Kwakhona kukho A/C, TV-player kunye DVD-player.
Ngaphezu koko kumgangatho ophantsi ungasebenzisa umatshini wokuhlamba, intsimbi yombane kunye nebhodi yokutshiza, unokufumana ikhitshi yesibini yendlu kunye neWC.
Okokugqibela, ungakonwabela isidlo sakho sakusasa okanye okunye ukutya kwiyadi yabucala, phantsi kwendawo yendalo eneediliya.
Ibhedi enkulu eyi-1, iibhedi ezincinci eziyi-2
Indlu ibekwe kumbindi welali eqhelekileyo yamaGrike. Inokufikelela ngokulula kwivenkile ekwikona, isikhululo sepetroli, iibhakary ezimbalwa (enye yazo iqhelekile ingumGrike), itaverna. Abantu balapha bathe cwaka, kwaye bahlala benobubele.
Sithanda ukuba iindwendwe zethu zibe nexesha elingcono kakhulu.
Siza kukunika ulwazi malunga nento omawuyenze kunye nendlela yokuthatha ithuba lokuhlala kwakho esiqithini.
Singakunceda ukuba usazise ukuba yeyiphi imisebenzi oyithandayo kwiholide yakho.
Singabonelela ngeemephu, iingcebiso ezilumkileyo kunye nolwazi oluluncedo malunga nesiqithi kunye nezinye iindawo onokuthi ubenazo ngaphakathi eGrisi. Siza kushiya ukhetho lweencwadi kwi-Zakynthos ukuze uyonwabele kwaye uphonononge. Kwimeko yonxunguphalo okanye nawuphi na umba, uncedo lunokunikwa 24/7 ngabanini-mhlaba.
Siza kukunika ulwazi malunga nento omawuyenze kunye nendlela yokuthatha ithuba lokuhlala kwakho esiqithini…
Inombolo yomthetho: 00000114878